EURO 2016: Tomas Necid oo ka caawiyay Czech Republic inay barbaro lagalaan Croatia (SAWIRRO) – Gool FM
EURO 2016: Tomas Necid oo ka caawiyay Czech Republic inay barbaro lagalaan Croatia (SAWIRRO)
Liibaan Fantastic June 17, 2016
(Saint-Etienne) 17 Juunyo 2016 Tomas Necid ayaa ka caawiyay xulka qaranka Czech Republic inay barbaro lagalaan xulka qaranka Croatia oo 2 gool uga hormaray kadib ciyaar cajiib ahayd oo ku soo idlaatay 2-2.
Ciyaartoyda xulka qaranka Croatia ayaa ku gacan sareeyay 90-kii daqiiqo ee ciyaarta taas ayaana u suuro galisay inay 2 gool taabsiiyaan shabaqa goolhaye Cech iyaga oo iska qasaariyay fursado badan.
37 daqiiqo Ivan Perisic ayaa hogaanka u dhiibay xulka qaranka Croatia kadib markii uu shabaqa dhex dhigay kubadd uu ka soo farsamaystay daafacyada Czech Republic wuxuuna ka dhigay ciyaarta 1-0.
Qaybtii hore ayaana ku soo idlaatay 1-0 oo uu hogaanka ku haayay xulka qaranka Croatia.
Qaybtii dambe xulka qaranka Czech Republic ayaa isku dayay inay soo barbareeyaan goolka looga hormaray laakiin ma suuro galin.
59 daqiiqo Ivan Rakitic ayaa quusiyay xulka qaranka Czech Republic kadib markii uu ka dhaliyay gool cajiib ahaa oo uu ka dul qaaday kubadda goolhaye Cech wuxuuna ka dhigay ciyaarta 2-0.
Ciyaartoyda xulka qaranka Czech Republic ayaa hurdada ka kacay wixii ka danbeeyay waqtigaas, 76 daqiiqo Milan Skoda ayaa gool u soo celiyay Czech kadib markii uu madax ku dhaliyay kubadd uu u soo karoosay Rosicky wuxuuna ka dhigay ciyaarta 2-1.
Daqiiqadihii lagu daray ciyaarta xulka qaranka Czech ayaa helay gool ku laad, Tomas Necid ayaana u badalay gool, wuxuuna ka dhigay ciyaarta 2-2.
Goolkii Tomas Necid ayaa dib u dhigay farxadii xulka qaranka Croatia ee ahaa inay ka soo baxeen Guruubka D.
'West Ham wey ogtahay kooxda uu rabo kamana celin karaan'
GOOGOOSKA: Italy vs Sweden 1-0 (Talyaaniga oo noqday dalkii 2-aad ee usoo gudba 16-ka)